နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: သခင်မြင်လှည့် ကြင်တော်မူ
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 8:04 AM
လရိပ်အိမ် June 3, 2013 at 9:27 AM
ကဗျာက ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေသလိုဘဲ မိုးနတ်ရေ။
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) June 3, 2013 at 6:18 PM
အလိုလေး မမိုးနတ်ကြယ်စင်မှ ဟုတ်ရဲ့ လားဗျ ။
ဒါမျိုးလေးတွေ များများ ရေးပါလေ ခသင် ကြွေပါလိမ့်မယ် ။
witch83 June 3, 2013 at 8:27 PM
ကဗျာလေးက တိုတိုလေးပေမဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးနဲ့ ဖတ်လို့ တော်တော် ကောင်းတယ်။ ခေါင်းစဉ်လည်း ကိုက်ပါတယ် sis ရေ.. :)
. . လင်းခေတ်ဒီနို . . June 4, 2013 at 6:47 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် . . . ဆိုတာ ဒါပဲလေ . . .း))
အလှအပတွေကို ချွေပြီးရေးထားတာ . . .
နောက်ဆုံးကျမှ လုပ်ထည့်လိုက်တယ် ရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်တဲ့ . . . သေရော . . .း)))))
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 5, 2013 at 7:50 AM
တကယ်လား မမ * လရိပ် *
အိုးးးးးးးးးးးး သခင်ကြွေဖို့ မလိုပါဘူး အကို * မင်းဧရာ * ရယ်...:)
အချစ်ဆုံး ကြွေဖို့ပဲလိုပါတယ် ....အချစ်ဆုံးက ဘူလဲ သိလား ?
ခေါင်းစဉ်ကိုက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် မမ * witch83 *
မိုးနတ်ကဗျာလေး လာဖတ်ပေးတဲ့အတွက်လဲ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နော် ချစ်မ :))))
ဟာ အကိုဗညားကလဲ တကယ်ဟုတ်တာပဲကို ....:)
မိုးနတ်မှ မညာတတ်ပဲကို ....:) * လင်းခေတ်ဒီနို *
ရာဇာထွေး June 7, 2013 at 7:14 AM
လေပြေ လေညုင်းလေးအလား...ညင်ညင်သာသာနဲ့ ဖွဲ့နွဲ့သွားတာ
သည်း ဦး သ ခင်မို့ ....
ဆိုပြီးအဆုံးသတ်လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာ “ဟာ” ပြီးကျန်နေခဲ့တယ် :)
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 8, 2013 at 7:26 AM
ကိုကြီး * ရာဇာထွေး *
အမြဲ သတိရလျက်ပါ :)))
ရာဇာထွေး June 11, 2013 at 9:19 AM
ညီမလေးရေ... အကို ဖဘ မသုံးတော့ဘူးနော်
ဒါကြောင့် ဖဘ မှာ ညီမလေး ပို့စ်တင်ရင်အကို မသိ
တော့တာပါ... အကို ဘလော့ ပဲလည်တော့မယ်... တော်တော်
များများ ဖဘ ကိုရောက်နေကြသလို ဘလော့လေးတွေမှာ ပို့စ်
မတင်ကြတော့ဘူး.. အကိုတော့ ဘလော့မှာဘဲ အချိန်ပေးပြီး
comment လေးတွေလိုက်ပေးတော့မယ်... ဘလော့ဂါတွေအ
တွက် comment လေးတွေဟာ နောက်ရေးမယ့် ပို့စ်လေးလေတွေ
အတွက် အားဆေး(တွန်းအား) တွေပါ... ဖဘ ကကွန်မန့်တွေထက်
ဘလော့ ကကွန်မန့်လေးတွေကို ဘလော့ဂါတွေပိုပြီးနှစ်သက်ပါတယ်..
ဒါကြောင့် အကို ဘလော့ကို ပြန်လာတာပါ.. ကိုယ့်ဆီကို ဘယ်သူ
မှမလာလည်း ကိုယ်ကတော့ရောက်အောင်သွားပြီး အားပေးစကား
တစ်ဖက်လူမှာ အင်အားရှိလာမယ်ဆိုရင် အကိုဘလော့လည်ရကျိုး
နပ်တယ်လို့ ခံယူပါတယ်... ဖဘ မှာဘာလေးရေးတင်လိုက်တင်လိုက်
ကွန်မန့်တွေ၊ like တွေရနေပါတယ်... ဘလော့မှာကြတော့ ပို့စ်တစ်ခု
ရေးတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်... အကိုတော့ ညီမလေး ညလေးချို ပြော
သလို ဖဘ ကကွန်မန့်တွေထက် ဘလော့ကကွန်မန့်လေးတစ်ခုကို ပိုပြီး
မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတယ်.. ကျန်တဲ့ဘလော့ရေးတဲ့ သူတွေလည်း ကိုယ့်
လိုဘဲ မြတ်နိုးကြမယ်လို့ အကိုခံစားမိတယ်.. ရေများရာ ရေစက်ချသလို
အရာမထင်မယ့် အတူတူ တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကနေဘဲ အကို
အားပေးမယ် လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဘလော့ပြန်လည်နေတာပဲ ညီမလေးရေ...
ဖဘ မှာကုန်မယ့် အချိန်တွေကို ဘလော့လည်ရင်းအသုံးချတော့မယ်
Sweety Snow June 8, 2013 at 12:12 PM
မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်နေတော့ အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေတာနဲ့ စာလည်း သိပ်မရေးဖြစ် ဘယ်မှလည်း စာလိုက်ဖတ်မရဖြစ်နေတာ မိုးနတ်ရေ.. အဲဒါကြောင့် ခုတလော ခဏပျောက်နေတာပါ.. ခုတော့ ပြန်ရောက်လို့ စာရေးတာတွေရော ကွန်မန့်တွေရော ခဏခဏပြန်မြင်ရတော့မယ်..။ ကဗျာလေး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် <3
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 9, 2013 at 7:26 AM
ဟုတ်လားးးး ၀မ်းသာမိပါတယ် စနိုးရေ....:)
အိမ်လေးကို သွားချောင်းတိုင်းလဲ မတွေ့တော့
နွေလ June 9, 2013 at 9:35 AM
အချစ်ဝတ္ထုတိုလေး ဖတ်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ
အာသီသ ဖြစ်မိတယ် အစ်မရေ
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 10, 2013 at 7:59 AM
အင်းးးးးးးးးးး တကယ်က အမလဲ မောင်လေးပြောသလို
၀တ္ထုတိုလေးတွေ သိပ်ရေးချင်ပါတယ် မောင်လေးရယ်...
တိုက်တွန်းတာလေးကို အမလဲ အမြဲအမှတ်တရရှိနေပါတယ်..
မေ့လဲ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူးးးးးးးးးးး ငါ့မောင်ဆန္ဒလေးလဲ
ရင်လှိုင်းခတ်သံ June 12, 2013 at 8:27 AM
သည်း ဦး သ ခင်မို့ ......။ သခင် မြင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...။
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 14, 2013 at 6:41 AM
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးကျေးပါနော် * ရင်လှိုင်းခတ်သံ *
မင်းအရိပ် June 14, 2013 at 8:50 AM
အမြဲလို ကဗျာလေး စာလေးတွေ လာဖတ်ပြီး အားပေးတတ်လို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်
မိုးနတ်လဲ ကဗျာကောင်းလေးတွေ ရေးနိုင်မှာ သေချာပါတယ်
မိုးနတ်ရဲ့ ဒီစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါဆိုတဲ့ ကဗျာလေးလဲ ရေးပြီးရင် ပေးဖတ်ဦးနော်
အခုတလောကတော့ စာမေးပွဲကိစ္စလေးတွေ မပြတ်သေးတာမို့ လာမလည်ဖြစ်သေးတာပါ
မိုးနတ်ရဲ့ ကဗျာလေးတွေကို အမြဲအားပေးနေပါတယ်
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) June 16, 2013 at 4:49 AM
အဲဒီဇာတ်ကားလေး မြတ် ကြည့်ဖူးတယ်။
မျိုးသန္တာထွန်းရယ် စိုးပြည့်သဇင်ရယ် နောက် ကျော်ရဲအောင်ရယ်။ အဲသည်လို ရှေးဆန်ဆန် ဇာတ်ကားလေးမျိုးကို သဘောကျတယ်။
ကဗျာလေးကလည်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ပါတယ်ကွယ်။
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 16, 2013 at 7:23 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ မင်းရေ ....* မင်းအရိပ် *
မင်းက စာမေးပွဲတွေ ပြီးသေးဘူးလား ?
မိုးနတ်ရဲ့ ကဗျာလေးတွေကို အမြဲအားပေး
နေတယ်ဆိုလို့ မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် :)
ဟုတ်လား မမမြတ် * မြတ်ပန်းနွယ် *
၅ သုခုမမှာ ထွေလာအစမ်းပဲကြည့်ဖူးတာ
အရမ်းနူးညံ့နေတာ သဘောကျမိတယ် :)
ခုလို မိုးနတ်ဆီ မှတ်မှတ်ရရနဲ့အမြဲ
မိုးနတ် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် :)
တခါတခါ အရမ်းလဲ သတိရနေမိတတ်ပါတယ်...
roseayemaung June 16, 2013 at 8:44 AM
သည်း ဦး သ ခင်မို့ ......*ဆိုပါလားနော်မိုက်တယ်*
မိုးနတ်ကြယ်စင် July 2, 2013 at 7:10 AM
:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP * နှင်းဆီအေးမောင် *
စံပယ်ချို July 21, 2013 at 6:04 PM